Isidlo seKrisimesi eRashiya | Ukuhamba kwe-Absolut
Isidlo seKrisimesi eRashiya
Kukho amawaka ezigidi ezi-2.400 zamaKristu ehlabathini abhiyozela iKrismesi ngokwahlukileyo, ngokwesiko lelizwe ngalinye kunye nehlelo lobuKristu abakulo. Kulesi sihlandlo, siza kuqwalasela indlela le holide ibhiyozelwa ngayo eRashiya kwaye yintoni isidlo sangokuhlwa seKrisimesi esiqhelekileyo kolu hlanga.
Amasiko eli lizwe analo malunga nalo mhla uthandekayo ahluke kakhulu kwinto esiqhele ukuyiqhela. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngeKrisimesi eRashiya? Qhubeka ufunda!
1 Ibhiyozelwa nini iKrisimesi eRashiya?
2 Njani ngobusuku bangaphambi kwekrisimesi eRashiya?
3 Ukufika ngokukhawuleza
4 Isidlo seKrisimesi eRashiya
5 Zeziphi iingoma zeKrisimesi eziculwa eRashiya?
6 Kwaye abantu baseRussia bayibhiyozela njani iSanta Nöel?
7 Unyaka Omtsha eRashiya
8 Abantu baseRussia bonwaba njani ngeKrisimesi?
Ibhiyozelwa nini iKrisimesi eRashiya?
Amahlelo obuKristu anelona nani likhulu labantu abathembekileyo emhlabeni, amaKatolika namaProtestanti, abhiyozela ukuzalwa kukaKristu nge-25 kaDisemba. Nangona kunjalo, iCawa yobuOthodoki ayenzi njalo. Ngaphandle kokwabelana ngenkolo, imfundiso kunye nezithethe nala maqela angasentla, uninzi loosolusapho boOthodoki babhiyozela iKrisimesi nge-7 kaJanuwari. Kodwa yintoni injongo?
Ngapha koko, iOthodoki, kubandakanya amaRashiya, babhiyozela iKrisimesi ngoDisemba 25. Kuphela balandela ikhalenda kaJulius, enguJanuwari 7 kwikhalenda kaGregory.
Njani ngobusuku bangaphambi kwekrisimesi eRashiya?
Ngendlela efanayo amaKatolika abhiyozela ngayo uKrisimesi ngomhla we-24 kuDisemba, amaRussia ayenza ngoJanuwari 6. Nge-10 ngokuhlwa, kwi-Cathedral kaKristu uMsindisi eMoscow, umongameli uqhuba umsitho wesiko kwilizwe liphela.
Kuyaziwa ukuba iAdvent yenzeka ngaphambi kweKrisimesi, ixesha lokulungiselela ukuzalwa kukaKristu. ERashiya apho ukholo lwe-Orthodox lubalasele, Ukufika kwenzeka ngoNovemba 28 ukuya kuJanuwari 6. Kweli nqanaba, ukuzila ukutya kuyenziwa okufikelela esiphelweni ngomhla wokugqibela we-Advent ngokuzila ukutya imini yonke. Inokuphulwa kuphela kwaye ityiwe kwakhona xa amakholwa ebona inkwenkwezi yokuqala.
Ukuthetha ngokutya, Ngaba uyazi ukuba zeziphi izitya eziqhelekileyo ezityiwayo kwisidlo sangokuhlwa seKrisimesi eRashiya? Iintsapho zihlala zilungiselela iindlela zokupheka ezahlukeneyo. Ezi zezinye zezona ziqhelekileyo:
Kutia: Esinye sezitya eziphambili zepati. Izinto ezisetyenzisiweyo zinentsingiselo efuziselayo kwinkolo yobuOthodoki. Yiyo ke loo nto ingqolowa ibhekisa kuvuko lukaKrestu kwaye ubusi buvelisa unaphakade. Isiphumo kukutya kwesiko apho unokongeza khona amandongomane, iidiliya kunye nembewu yepoppy.
Irhasi erusiweyo: Ngexesha leAdvent kwakungavunyelwanga ukutya inyama ke xa kufika iKrisimesi, abantu baseRussia babelungiselela izitya ngothakazelelo kunye nesi sithambisi sokuzila ukutya. Amarhanisi eyojiweyo sesinye sezona zitya zithandwa.
IhaguEsinye isidlo esityiwa ngexesha lesidlo seKrisimesi eRashiya yihagu encancisayo okanye njengoko amaRashiya eyibiza ngokuba "yihagu yobisi". Ityiwa yosiwe ngesidudu kunye nemifuno. Kuqhelekile ukuyithatha ekupheleni kwe-Advent ukuphelisa ukukhawuleza.
Coulibiac: Le khekhe egxityiweyo ibetha nakweliphi na itheko kwaye ihlala ikhonjiswa kwisidlo sangokuhlwa seKrisimesi eRashiya. Inokwenziwa kwiintlobo ezahlukeneyo zentlama eyahlukileyo ngeentlanzi, irayisi, inyama, imifuno, amakhowa, amaqanda. Kufana nokutya okupheleleyo kwisiqwengana esinye sekhekhe!
Vinaigrette: Isaladi yesiko elungiselelwe iitapile, iminqathe, ii-beet, i-pickles kwiviniga kunye neoyile. Nanamhlanje isesinye sezona zitya zithandwayo kwisidlo seKrisimesi eRashiya kuba kulula ukuyilungisa kwaye ayibizi mali ininzi. Nangona kunjalo, iintsapho ezifuna ukuthatha amava enkalakahla yazo ziye kwelinye inqanaba zongeza iintlanzi ezintle ezinje ngesturgeon.
Isaladi yeOlivierYenye isaladi elula yokwenza iiholide. Ineminqathe, itswele, iqanda elibilisiweyo, iitapile, i-pickle, isoseji kunye nee-ertyisi. Yonke into exutywe nemayonnaise.
Kozuli: Le yenye yeelekese ezidumileyo eRashiya ngexesha leKrisimesi. Ezi cookies zeKrisimesi zenziwe nge-gingerbread eqhekezayo kunye nesiraphu kwaye ihonjiswe ngeswekile yeswekile. Ezona fom zixhaphakileyo ekuboniswa ngazo iicookies ziingelosi, iinkwenkwezi zeKrisimesi, izilwanyana kunye nezindlu. Zikwasetyenziselwa ukuhombisa umnyhadala.
Vzvar: Emva kwesidlo seKrisimesi eRashiya esi siselo sinikezelwa njengedessert. Ilungiselelwe ehovini kunye necompote eyenziwe ngeziqhamo kunye namajikijolo anongwe ngamayeza, iziqholo kunye nobusi obuninzi. Yeyona ndlela ilungileyo ngaphandle kwewayini eshushu okanye inqindi.
Itafile igutyungelwe ngeendiza, kukhunjulwa indawo awazalelwa kuyo uYesu, kwaye kubekwe ilaphu elimhlophe ngaphezulu.
Zeziphi iingoma zeKrisimesi eziculwa eRashiya?
E-Russia iingoma zesiqhelo zeKrisimesi zithathelwa indawo yingoma yesiSlavic eyaziwa njenge-Koliadki. Le ngoma idla ngokuculwa ngo-Eva weKrisimesi liqela labantu esitratweni benxibe iimpahla zommandla.
Kwaye abantu baseRussia bayibhiyozela njani iSanta Nöel?
E-Russia ayingoBawo Nöel onika abantwana izipho ngokuchwechwa kwiitshimini zezindlu zabo kodwa nguDed Moroz ephelekwa ngumzukulwana wakhe uSnegurochka. Olu phawu luzisa izipho kubantwana ngoSuku loNyaka oMtsha, kwikhalenda yaseRussia ngoJanuwari 12.
Unyaka Omtsha eRashiya
Ukuthathela ingqalelo ukuba iKrisimesi ingoJanuwari 7 kunye noEva ngeKrisimesi ngoJanuwari 6, ikhalenda yaseRussia iyaqhubeka nokusebenza kwaye uNyaka oMtsha ubhiyozelwa ngobusuku bukaJanuwari 12-13. Umbutho waziwa ngokuba ngu "The New Year New." Unomdla, akunjalo?
Ukusukela kumaxesha eSoviet, ibingowona mnyhadala ubalulekileyo uthandwayo enyakeni kwaye ngalo mhla umthi we-fir tree uhlala uhonjisiwe, uthweswe isithsaba ngenkwenkwezi ebomvu. Isimboli yobukomanisi.
Abantu baseRussia bonwaba njani ngeKrisimesi?
Abantu baseRussia bayonwaba ngeendlela ezininzi ngeKrisimesi. Esinye sezona zithethe zixhaphakileyo zaseRussia zokuchitha iiholide ziya konwaba iirink zokukhwela emkhenkceni. Bakho phantse kuyo yonke indawo!
Imiboniso yeWink ilungiselelwe abantwana, owona mxholo uphambili kukuzalwa kosana olunguYesu nolufana noluthandwa ngabantwana.
Abantu abadala bakhetha ukuya ezivenkileni ukuze bafumane izipho zeKrisimesi. Izitolo kunye namaziko okuthenga zihonjiswe ngazo zonke iintlobo zezibane, iigaranti, imithi yemisipresi, amadoda ekhephu, njl. Abantwana bahlala benikwa iithoyi njengakuzo zonke iindawo zehlabathi kwaye abantu abadala banikwa iincwadi, umculo, itekhnoloji, njl.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Isidlo seKrisimesi eRashiya
Abanye abadlali abadumileyo baseMorocco